upende Modern futhi varnishes emakethe usinikeza eziningi ongakhetha for ekuhlobiseni isikhala ephilayo. ibanga okunjalo lesibanti kungumhlahlandlela sekumiswe umthengi olindele kunazo futhi ubonise ukuqonda. Iziphi izimfanelo okufanele abe upende kuhle ifenisha? Ake sizame ukuthola it out.
Ukuze uqale, siphawula ukuthi yonke imibala zihlukaniswe amaqembu amabili - ungaphumi lapho ifakwa emanzini namafutha (zingaxazululeki). Imikhiqizo yohlobo yokuqala aqukethe binders futhi eba nezakhi zombala ezenza. Hlobo luni upende kungcono ukupenda ifenisha? Nazi izibonelo ezimbalwa.
Uma ufisa ukuthola indawo eqinile futhi ecwebezelayo, kufanele usebenzise upende wamabhayisikili lacquer ifenisha. Basuke edayiswa yisiphi isitolo okukhethekile. Mat umphumela bungatholakala ngokusebenzisa uwoyela upende. Iningi lawo abantu kakade isilungele ukusetshenziswa futhi ayidingi ukuncibilikisa.
Labo abafuna ukulondoloza isakhiwo yemvelo kwezinkuni, sincoma upende esobala, okungenzeka ezihlukile umbala. Uma uhlanganise ndawonye, uthola i inhlanganisela ezithakazelisayo.
I ofanele kakhulu futhi kulula ukusebenza ukhuni evele kubhekwa upende acrylic for ifenisha ekhiqizwa amathini. Waze uwela futhi bome ngokushesha. Uma ngokuqinile landela imiyalelo ebiyelwe, uzothola yi okukhulu.
Paint for ifenisha zezingane ingakhetfwa ngokukhulu ukucophelela kanye nomthwalo wemfanelo. Phela, kungenzeka ukuthi nomthelela omubi empilweni yengane yakho. Ukwakheka upende ezinjalo akufanele kube izinto ezibangela ukusabela nomzimba.
Ngaphambi kokuya esitolo, kubalulekile ukuqhuba ukuqeqeshwa pre-ukuthunyelwa, okungukuthi, sanded futhi primed ebusweni. Painting ifenisha ixubene kahle bese isetshenziswa ngesitulo, itafula nezinye izinto. Umsebenzi onjalo Kunconywa ukugqoka amagilavu.
Lapho imibala ekhetha kufanele acabangele impahla kuyiphi ifenisha senziwa. Sales esemnika ukuvenisha, enika ebusweni i look tebuciko, yesimanje kanye wobuciko. Ngaphezu kwalokho, zinikeza isivikelo izinkuni ngokumelene ukungcola, uthuli futhi umswakama ngokweqile. Ethandwa kakhulu iyona upende ifenisha izithako isinqandakuvunda.
Njengoba for upende, bahlukene zibe lezi zinhlobo ezilandelayo: epoxy, utshwala, alkyd, polyurethane, uwoyela nitrocellulose. Ngokungafani opende, ifenisha lacquer yakha eqinile futhi uzinzile. Nakuba kungezona zonke abanikazi amafulethi emizini yabazalwane ezisheshayo uyithenga.
Abaningi namanje uthanda upende acrylic. Phela, nabo basuke babe ukumelana namanzi futhi awaqukethe izinto eziyingozi, futhi ngakho-ke ngokuphelele efanelekayo izingane ekhishini ifenisha. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe lokhu upende ukuthi seyomile ngokushesha.
Ungakhohlwa ukuthi ifenisha kungaba ongelona ukhuni kuphela kodwa futhi metal (kwachuma iphrofayli). Leli qiniso kufanele kunakwe lapho ukhetha umkhiqizo upende. Ukuze sisebenze ifenisha kwensimbi kungcono ukusebenzisa ukugqwala koqweqwe lwawo ukumelana.
Heater amanzi "Thermex": ukubuyekezwa, izinhlobo, izinzuzo
Amazwana mayelana Jigsaw Bosch PST 900 pel
Boiler "Baxi": Iphutha E10, imiyalelo ngokuxazulula inkinga. The main iphutha amakhodi kubhayela "Baxi"
Imiyalelo enemininingwane inhlangano yabantwana bakwa-usofa, "Monaco" "Kuningi ifenisha"
Umuthi 'Sirdalud "Iziyalezo yokusetshenziswa
Imali yaseJapan: umlando wokuthuthukiswa kwemali
Grand Tsimlyansk kwesigubhu